Resaky ny mpitsimpona akotry : ao ny hetraketraka eo ihany koa ny fahalanin’ny vatsy | NewsMada
Par karine sur 26/10/2016
Tsy voalohany izao ity fitarozaky ny fanefan’ny fitondrana foibe an’ireo ampaham-bola voalaza atokana ho an’ny kaominina tsirairay. Maro amin’izy ireto no mbola tsy nandray na iraimbilanja aza amin’izany anjarany izany. Fantatra fa eo ny anifin’ny kitapom-bola izay mametra ny fahafahana manao, nefa tazana ihany koa fa eo andanin’izany maro ireo rendrarendra tsy andeferan’ny mpitondra na idiran’ny fanjakana trosa aza ny fanatanterahana an’ireo azo lazaina ho sitrapo fotsiny. Eo ihany koa ny fifampilafilana, sanatria fanaovana halako bika halako tarehy ka tsy maharototra na iniana ampiandrasana mihintsy aza toy ny hoe fanaovana fahirano nohon’ny firafesana eo amin’ny sehatry ny adilahy pôlitika. Mibaribary eto ny fomba fanjakana tsy voafehin’ny lalàna, afaka manjakazaka ny mpitondra amina fitantanana ny fanjakana sy ny vola-panjakana ataony toy ny fananany manokana.
Mbola tsy ary fomba angamba ireo lalàna sy fitsipika tokony hifehy ny fitsinjarana sy ny fotoana anefana ny vola voatokana ho an’ny vondrona manana ampahany eo amin’ny fanapariahana fahefana. Ny vola anefa no hozatra ahafahana manefa ny adidy fanatanterahana sy ny fitantanana ny asa fampandrosoana. Saro-pady noho izany ny vola ka tsy izy no afaka anaovana sangy mahery entina ampifilafilana eo amin’ny fanefana azy arak’izay tokony ho izy. Ny fatra atsasany matetika no manimba raharaha, tsy vitan’ny hoe mikobana noho izy feno tapany, fa noho ilay fanao tsy tomombana tsy hita ho fehezina, mihagoragora miandalana ny fanatanterahana, toy ny miha manalavitra ny tanjona ka lany tsiro, vita teo ny hafanam-po.
Tsy indray mandeha no tratran’ny aloka toy izay ny fanatanterahana ny andraikitra eo amin’ny raharaham-pirenena, raha mandinika ny fihemorana noho izany sarotra ihany no tsy anomezan-tsiny ny mpitondra izay tsy novoizina fa nanolo-tena ary nifandrombaka mihitsy aza handray ny andraikitra eo amin’ny toerana misy azy. Tsy tokony ho misy ny fanatanterahana tapany, ny firenena tsy misorona fa mangamangana mihitsy eo am-panefana feno ny tambiny sy ny tombotsoa sitrahany ny mpitondra. Aiza no tsy hitranga hatrany ny hetsika mitaky ny fanesorana an’izay manefa tapany nefa mandany erany.